I "MagSafe" ibuyela kwi-Mac. Kule meko kwi-iMac | Ndisuka mac
I «MagSafe» ibuyela kwi-Mac. Kule meko kwi-iMac
Intambo eboshiweyo yetshaja yeMac entsha kunye nesinxibelelanisi kunye neemagnethi. Kwaye sinokuthi emva koko iMac yongeza uhlobo lweMagSafe ukulayisha izixhobo, ayibhekiswanga ngokwenyani njenge MagSafe ngu Apple kodwa isebenza ngoomazibuthe.
Iintambo zangoku zeMac zibonelela ngonxibelelwano olucocekileyo ngasemva kusetyenziswa intambo eshinyeneyo edityaniswe ngqo eludongeni ngaphandle kwesidingo sombane, kule meko iimodeli ezintsha zenza Bafuna isiguquli esiya kuthi sisebenzele ukuqhagamshela intambo ye-Ethernet ukuba kukho imfuneko.
I-IMac ayizukuwa ukuba ukhubeka ngentambo yayo
Nangona singenalo unxibelelwano neqela elitsha le-Apple Ukuqinisekisa ukuba olu nxibelelwano ngomazibuthe lomelele ngokwaneleyo ukumelana nengozi, sinokuthi iintambo ezidityaniswe ngoomazibuthe zihlala zinika ukhuseleko olongezelelekileyo kumsebenzisi.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iintambo ezongezwe yile iMac zinde ngokwaneleyo ukuba zixhomekeke emva kwetafile, ke ukudlula kunye nokukhubeka ngentambo ayisiyonto ingaqhelekanga. Okungakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba ezinye zeMac zibonakalisiwe ngaphambili edesikeni. Ubunzima bale iMac intsha ikwachaphazela ukusukela kwiikhilo ezingaphantsi kwesihlanu Oko kubunzima izixhobo ke kunokubangela ukuba iwe ngengozi emva kokurhuqa intambo, ke ngoko ukubaluleka kokusebenzisa iMacSafe okanye kungcono ukutshaja intambo ngoomazibuthe.
Sifuna ukuba phambi kwenye yezi iMac ukuya jonga indlela yokudibanisa kwaye unqamle le tshaja intsha kwaye ubone ubungakanani besiguquli ukuba ngokomgaqo kufuneka sibe sikhulu kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » iMac » I «MagSafe» ibuyela kwi-Mac. Kule meko kwi-iMac
Ikhamera ye-IPad Pro 'yeZiko leNqanaba' iya kuxhasa ii -apps zomntu wesithathu